अन्तर्वार्ता | 2019-05-27 11:36:00 |
काठमाडौं जेठ, १३–
सार्वजनिक लेखा समितिमा तपाईं के भन्नुभएको थियो कुलमान घिसिङसँग के त्यस्तो विवाद उत्पन्न भयो ?
सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिले रुलिंग गरेपछि सभापति आफैंले पनि केही प्रश्न तेस्र्याउनु भएको छ । त्यसपछि सचिव, डिएमडी र त्यसपछि कुलमानजी बोल्नु भएको थियो । उहाँहरु बोलिसकेपछि सांसदहरुले बोल्ने क्रममा मैले बोलेको हो । मअघि राजन केसी बोले । लेखराज भट्ट पनि बोले । शरदसिंह भण्डारी पनि बोले । त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणले नौ अर्ब किन उठाएन ? भन्ने विषयमा छलफल गर्न हामीले कुलमान घिसिङसहितलाई बोलाएको हो । हामीले केही साथीहरुले उठाएका प्रश्नहरु गर्दा लेखा समितिमा जनताका प्रतिनिधि भएको नाताले मैले उठाएको हो । कुलमानजीले कसरी लिनु भयो थाहा छैन ।
तारको विषयलाई लिएर विवाद भएको भन्ने कुरा छ नी त ?
म कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । म साधारण थारुको छोरो हो । ठूला मिडियामा यस्ता कुरा आएका रहेछन् । कुलमानसंँग मेरो भेट भएको छैन । चिनजान पनि छैन दोहोरो । जहाँसम्म तारको कुरा छ त्यो मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । जनताले प्रशारण लाइनको तार नजोड्न भनेका छन् । उनीहरुले मुआव्जा मागेका छन् । त्यो विषय ६ महिनाअघिको कुरा हो । त्यो बेला बहस निस्केन । लेखा समितिमा ९ अर्ब बेरुजु किन नउठाएको भनेर सोधेपछि मेरो विषयमा विवाद उत्पन्न गरियो । कुलमानजी असल मान्छे हो भन्ने सुनेको छु । तर प्रश्न गर्न नै नपाईने झै किन गरियो भन्ने अनौठो लाग्छ । उद्योगीलाई दिइएको बिजुलीको पैसा किन उठाइएन तीन तीन वर्षसम्म ? एक वर्षभन्दा अगाडिको पैसा कसरी उठाउने भन्ने प्राविधिक समस्या रहेछ ।
तपाईंले उठाएको कुरा महत्वपूर्ण हो । तर प्राधिकरणले त महशुल असूल गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ त ।
मैले भनेँ त । यो तीन वर्षअगाडिको कुरा हो । अहिलेसम्म उहाँले के हेरेर बस्नुभयो त ? किन पत्र काट्नु भएन ? किन छानविन समिति बनाउनु भएन ? तीन वर्षपछि जनताले, मिडियाले उठाएपछि पत्र काट्ने र छानविन समिति बनाउने काम भएको छ । तीन वर्षअगाडिको मिटरको अंक नै थाहा हुँदैन । तीन वर्षअगाडिको रिडिङ कसरी गर्ने ? भन्नुस । उहाँले कसरी असूल गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो हामीले सोधेको । कुलमानजी राम्रो मान्छे हो भन्ने सुनेको छु । तर संसदमा यी विषयहरु प्रवेश गरेपछि उहाँले उत्तर दिनु पर्नेमा अन्टसन्ट बोल्न थाल्नु भयो । जनताको अगाडि क्लिएर गरेको हुने थियो नी त ।
प्रशारण लाईन बन्न नदिने स्थानीयलाई कुलमान घिसिङले थुनिदिन्छु भनेको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यसमा तपाईंले के तपाईं सिडिओ हो ? भनेर कुलमानलाई थर्काउनु भयो नी किन ?
हो मैले भनेको हो । उहाँको काम मान्छे थुन्ने होइन । कसैले गलत गरेको रहेछ भने कारबाही गर्ने अरु निकाय छन् । आफ्नो दायर नाघेर काम गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । लोडसेडिंग अन्त्य गरेको एउटा कामलाई देखाएर त्यसको आवरणमा धेरैवटा अपराध गर्न पाइँदैन । कतै लोडसेडिंगको विषयलाई समाएर त्यस्तै काम गरेको त होइन ? भनेर मैले उहाँलाई सोधेको हो । जनतालाई थुनिदिन्छु भनेर हुर्मत किन लिएको भनेरर सोधेको हो ।
एकदिन काम रोकिँदा करोडौं नोक्सानी हुन्छ । एकाध मानिसले काम अवरोध गर्छन् भने त्यस्तालाई थुन्छु नभनेर के फूलमाला लगाइदिनु पर्ने हो र ?
उहाँले थुन्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ त ? मूल प्रश्न यो हो । यो विषय जनताले पनि बुझ्छन् नी त । संसदमा जब यो प्रश्न प्रवेश गर्दछ, यहि विषयवस्तुलाई तोडमोड गरियो । किनभने हामीले ९ अर्बको कुरा उठाएका थियौं । कतै प्रधाकरणको पनि मिलेमतो त छैन ? भन्ने हामीलाई शंका लागेको छ ।
लोडसेडिङ कसरी हट्यो ? कुलमानका कारण कि भारतबाट आयात भएको बिजुलीबाट ?
लेडसेडिङ अन्त्य गर्ने श्रेय घिसिङलाई नै जान्छ । यो कुरामा विवाद गर्नु हुँदैन । हामीले गरेको प्रश्न तीन वर्षअगाडिको कसरी रिडिंग गरेर पैसा उठाउने ? भनेर मैले सोधेको । त्यो बेला नै किन उठाइएन ? यो बेला के गर्न खोजेको ? यस्ता कुरा मैले सोधेको हो । यति ठूलो रकम उठाउन सकिएन भने के गर्ने ? तीन महिनाअघि नै प्रशारण लाइनका विषयमा जनताले गरेको गुनासोको कुरालाई यतिबेला ल्याएर यो विषयसँग किन जोडियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । तर मैले कुलमानसँग पाँच लाख मागेको कुरा प्रचार गरिएको छ । यदि मैले कुलमानसँग पैसा मागेको प्रमाणित भयो भने सार्वजनिक रुपमा टुँडीखेलमा चम्चाको पानीमा नाक डुबाएर आत्मदाह गर्छुु । यो मेरो चुनौती भयो ।
तपाईंहरुलाई त कुलमान घिसिङले संसदमै थर्काउनु भयो नी ?
हो, उहाँले लेखा समितिको बैठकमै तपाईंहरु मर्यादामा बस्नूस् भन्नुभयो । के अब सांसदहरुले कुलमानलाई प्रश्न नै गर्न नपाउने हो त ? हामी जनताका प्रतिनिधि, हामीले गर्ने प्रश्न त जनताको हो । जनताले के अब प्राधिकरणलाई प्रश्न गर्न नपाउने हो त ? जनता भन्दा पनि माथिल्लो तहको हो त प्राधिकरण । विषय यो महत्वपूर्ण भएको छ ।